Umkhuleko wokuheha indoda. ? Ngokushesha nangomqondo.
Umkhuleko wokuheha indoda Ingagxekwa kakhulu kepha isebenza kakhulu futhi inamandla.
Kungumkhuleko ongahloselwe ukwenziwa ngabesifazane kuphela, yize laba kuyibo abasebenzisa lesi sikhali kakhulu ukulwela lobo budlelwano bothando obudinga ukungenelela kukaNkulunkulu.
Kumele kuqashelwe ukuthi akudingekile ukulindela ukuthi ubudlelwano buzocekeka ngokuphelele lapho benza lo mthandazo kodwa kungenziwa kusuka kwizimpawu zokuqala zokuthi izinto azihambi kahle.
1 Umkhuleko wokuheha indoda esheshayo
2 Umkhuleko wokuba uthandane nowesilisa onomqondo
3 Umkhuleko wokuphelelwa yithemba ngemizuzwana
3.1 Uyini lomkhuleko?
3.2 Ngingasho yonke imithandazo?
Umkhuleko wokuheha indoda esheshayo
«Moya oNgcwele, wena owazi amandla omphefumulo wami ngaphezu kwanoma ngubani ...
Ngiyakucela ukuthi uhlanganyele esicelweni sami, ukuthi ngamandla akho ungenze ngisondele (igama lesithandwa), ukuthi lowo muntu uzizwe zonke izimfanelo zami futhi ethandwa phambi kwabo, ngiyakucela, Nkulunkulu oNgcwele ukugoba intando yakhe nokuthi isifiso sakhe sibe yiba eceleni kwami
Ngibheke futhi uzwe lonke uthando lwami nokuzinikela kuye.
Moya Oyingcwele Othandekayo, mphathi wemiphefumulo, ngicela ukuthi uze kimi, ngicela usizo lwakho oluqotho lokuphendula umkhuleko wami ...
Ngiyakucela ukuthi uthando lwakhe alusenandaba nami, ukuthi akangigweme, ukuthi uhlala ekulungele ukukhuluma nami, ukuthi amandla akhe uzungu kuphela kimi.
Ngiyakucela, kwangathi indoda ekuthandayo ingeza kimi futhi kwangathi amandla ethu angaba munye kuphela, kwangathi amandla akho angangijoyina naleyo ndoda engiyithanda kakhulu.
Ngokuhlengwa okungcwele komoya wami othandekayo Ongcwele waseZulwini, ngiphe amandla adingekayo kulowo muntu ukuba angithande, uyazi imiphefumulo yethu futhi namuhla yisikhathi sokuba uwahlanganise ...
Ngiyakwethembisa ngenhliziyo yami ukuthi uzomthanda, ukuthi (umuntu othandekayo) uyohlala ejabule nami, ukuthi akusoze kwanele noma lusizi enhliziyweni yakhe uma kuncike kimi.
Namuhla umoya ongcwele ngikucela ngentshiseko enkulu ngothando lwakho nenkampani yakho. Amen "
Izifiso zethu kumele zibe yilawo mandla angaphakathi ngaphakathi osiholela ekubuzeni kakhulu lokho okuvutha njengelangabi eliphilayo ngaphakathi kithi.
Lowo leyondoda ibuya ngokushesha Kuyasiqinisekisa ukuthi imizwa yalowo muntu ingasindiswa kalula ngoba asinikanga isikhathi sokuba inhliziyo yakhe ingcoliswe nabaphatheli abangavimba noma baphazamise inhloso esiyifisayo.
Akusikho ukwedelela noma isifiso esizalwe ngokuziqhenya kepha kumayelana nokukhulula ikhaya, umndeni, ubudlelwano obusengozini yokuphela kwaphakade.
Uma omunye wababili laba bantu esafuna lobu budlelwano buqhubeke, khona-ke konke kungenzeka.
Umkhuleko wokuba uthandane nowesilisa onomqondo
«Isikhathi sothando sesifikile.
Inhliziyo iyavuka futhi ngifuna ilungelo lami lobuzibulo futhi ngithathe uhlangothi lwami lokuzithemba, ikhono lami langaphakathi lokuthanda nokuhlala ekwamukelweni kothando.
Ngibe nezinkinga zothando phambilini.
Inhliziyo yami ilimele. Ngake ngaba ngedwa, ngithukuthele, ngingajabule, ngidabukile futhi ngikhathazekile.
Bengihlala ngikholelwa ukuthi akunakwenzeka ukuthola uthando lweqiniso, oluhlala njalo noluthinta inhliziyo.
Kepha ngikhetha ukwelapha lokhu manje.
Ngikhetha uthando futhi ngikhetha ukuthola uthando lwami lweqiniso.
Ngenza isinqumo esisha sokubuyisa ubumsulwa benhliziyo yami futhi ngiphinde ngihlangane nothando olujulile nolunyakazayo. "
Ngalezi zikhathi lapho singabaza khona izintelezi zethu noma kuphi asixhumani ngokwenyama naleyo ndoda Singenza lomkhuleko onamandla ukuze ngokuxhuma kwengqondo noma kokomoya leyo mizwa yothando iqale ukukhula.
Kungasebenza nakulezobudlelwano obude obude, ukugcina ingqondo yaleyo ndoda ihlala icabanga ngathi kungasisiza kakhulu futhi kungamenza ukuthi angabe nakancane othandweni.
Umkhuleko wokuphelelwa yithemba ngemizuzwana
«Umoya onamandla wokunquma, ngiyakucela namuhla ungisize, ukuphelelwa yithemba kuphenduke umoya, namuhla ngiyakuncenga, umoya kaDon Juan da Conquista ungisize, umoya wothando, woza kimi, umoya kaSanta John umvukuzi, gijima ukungisiza, umoya onamandla wemimoya emine, izindlela nezindawo.
Unamandla futhi ulungile umoya weSanta uMark kaLeon, onamandla futhi othukuthele uSanta, umoya oyi-Pious weSanta Helena Ovela eJerusalema.
UMoya weSan Salvador de Horta, Umoya kaMaría Cabeza, Umoya odlisayo weSalvador de Horta, imimoya egcwele ubuhle nomusa, namuhla ngicela usizo lwakho, ngiyakucela futhi ngikuyalele ukuthi ungisize.
Mnumzane wezinzwa ezinhlanu, imicabango yokwahlulela, intando nomoya ophilayo, namuhla ngize ukubuza kuwe, ukungisiza kahle: (igama lalowo muntu) Ngibuza osanta balolu suku.
Ngibuza kosanta wosuku umuntu azalwa ngalo nosuku loyo losanta azalwa ngalo.
Ingelosi yami egada
Ngihlanganisa leli khandlela ukuze engqondweni yakhe akukho okungangithinti, ukuthi umzimba wakhe uyangidinga, ukuthi ilungu lakhe locansi lijabule nami kuphela, ukuthi ikhanda lakhe licabanga ngami kuphela, ukuthi izandla zakhe zifuna ukuthinta umzimba wami kuphela, ukuthi izinyawo zifuna ukuhamba kimi, ukuthi umcabango wakho, ukwahlulela nentando, kube ngedwa kuphela.
Nginikeze amandla okwenza kahle intando yakhe, ukuthi (igama lomuntu) kuphela abangicabanga ngami, bafuna mina futhi ngifuna yena kuphela, noma abangcwele ngicela yena kuphela ukuthi angisize futhi anginike uthando lwakhe ngoba ngilifanele. ”
Lona ngumkhuleko okumele wenziwe ngokuzibophezela nokwazi ukuthi yinkinga ebucayi esizosibuza yona.
Sifiso umuntu futhi ukuyifinyelela ngemizuzwana nje kudinga ukuthi sibeke onke amandla ethu kulokho esikucelayo futhi, okubaluleke kakhulu, ukuthi sicela ukwazi ukuthi esikudingayo kungatholakala kuphela ngokwenza lo mkhuleko.
Ukukholwa kunamandla, ngoba kuya ngokusebenza kwalokhu futhi yonke imikhuleko ukuthi singenakwenza noma ngabe yini esiyicelayo.
Imikhuleko yokuphelelwa yithemba ngemizuzwana uma basebenza futhi benamandla amakhulu.
Akukhulunywa ngomlingo noma yisiphi isiqalekiso esisebenzayo, futhi asifuni ukubusa unembeza womunye umuntu lokho esikuthola kalula, esikucelayo ukuthi le ndoda ibona zonke izimfanelo esinazo futhi ihambe ngokuhlanya ngokuba nathi.
Lo neminye eminye imikhuleko isebenza izinto eziningi, enye yazo emhlabeni jikelele ukugcina ukholo lwethu luphila.
Kulesi simo esithile singaba nezicelo ezikhethekile.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi singawenza lo mkhuleko ezinhlwini zangaphandle ezinjengomkhathi noma uNkulunkulu othile kepha futhi singazenzela thina, kubuntu bethu bangaphakathi.
Into ebalulekile ukuzwa ukuxhumana okhethekile ne- el mundo okomoya okuyilapho kulwa khona izimpi zangempela.
Ngemuva kwalokho singacela ubudlelwane bethu bothando, ngoba leyondoda eyasuka kude nathi futhi engafuni ukubuyela, singacela uthando ukuthi izalwe kabusha enhliziyweni yakhe futhi ifune ukubuyela kulelo khaya layilahla.
Ngingasho yonke imithandazo?
Yebo, yonke imithandazo esiyifunayo idonsela amandla amahle kithi futhi ihlanze indawo engokomoya esizungezayo.
Lokhu kuyinzuzo esingaqala ukuyithokozela kusukela lapho siqala ukwenza umthandazo wethu.
Kunconywa ukuthandaza nsuku zonke futhi ukwenze usuka ekujuleni komphefumulo, ulandele umthandazo okhethekile noma usebenzise amagama ethu futhi unokholo olukhulu.
Yiba nokholo emthandazweni ukuze udonse uthando lwendoda.